म अझै ज्युँ दै छु, जनगणना मैंले गराएको हुँ, लिपुलेक हाम्रै हो – भैरव रिसाल
Homeबिबिधम अझै ज्युँ दै छु, जनगणना मैंले गराएको हुँ, लिपुलेक हाम्रै हो – भैरव रिसाल
काठमाडौं । बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले दार्चुला जिल्लाको व्यास गाविसमा पर्ने विवादित लिपु लेकको जनगणना आफूले गरेको बताएका छन् । विसं. २०१८ सालमा उनले तथ्यांक विभागको अधिकृत भएका बेला लिपु लेकको जनगणना गरेका हुन् ।
जुन भूमीलाई अहिले भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेको छ । लामो समय देखि भारतले लिपु लेक आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।पत्रकारिता गरिरहेका भैरवलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने रहर थियो ।
त्यही समय सरकारले तथ्यांक संकलनका लागि अधिकृत माग्यो । “सरकारले विसं ०१८ मा जनसंख्या र कृषिको तथ्यांक संकलनका लागि अफिसर माग्यो । तर, त्यो २६ महिनाका लागि म्यादी अफिसर थियो ।
म्यादी भएपनि २ वर्षको जागिर हो भनेर मैले आवेदन दिएँ,,” उनले भने, “नभन्दै एकातिर पत्रकारिता गरिसकेका चल्तापुर्जो थिएँ, अर्कोतर्फ अन्तर्वार्ता लिनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. यादवप्रसाद पन्त र डा. पुस्करनाथ पन्थ रहेछन् । उनीहरुसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । यी दुवै कारणले पनि म छनोट भएँ ।”
डोटी–डडेलधुरा–बैतडी हुँदै सीमाना झुलाघाट पुगे । हिन्दुस्तानको पिथरागड पुगे । नेपालको भारतको धार्चुला हुँदै दार्चुला आए । उनलाई मुखिया र गणक भर्ना गर्ने अधिकार सरकारले दिएको थियो ।
मैले असारमा जनगणना गरेकाले खरदारले मुखिया र गणकलाई लिएर त्यहाँको जनगणना गराउनु भएको हो । त्यसैले अहिले पनि भन्छु, लिपुलेक निर्विवाद हाम्रै हो । लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्रै पर्छ भनेर म दाबी गर्छु, किन भने ०१८ सालमा त्यहाँको जनगणना मैंले गराएको हुँ । म अझै ज्युँदै छु ।”
अहिले व्यास गाविसमा पर्ने उक्त क्षेत्र त्यो पञ्चायत कालमा बैतडी जिल्लाको गाउँ मात्रै थियो । भारतले लिपु लेक र कालापानी आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेपछि नेपालमा भारतीय उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त भूमी नेपालकै भएको बताएको छ । भारतले एकपक्षिय निर्णय मान्य नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । -बाह्रखरीबाट
३० जना नागरिक लिन काठमाण्डौ आयो पाकिस्तानी जहाज
यसरी ग हभरी आँ शु पार्दै भारत फ र्किए लु किछिपी नेपाल छिरेका २६ नेपाली
generic tadalafil reviews – online tadalafil buying tadalafil online safely
tadalafil buy – http://xtadalafilp.com/ generic tadalafil reviews
Mkmhwh – Brand viagra over the net buy cheap viagra online
online canadian pharmacy cheap ed pills in mexico
Vqoerm – modafinil generic Kifnfm xcubef
ed pills online solutions for ed
Zoxkkr – cialis livraison 24h Mooksq xpzaap
Xodfql – furosempi.com Zevcvx xicpxk